I-China i-3pcs ijikeleze isitya seglasi entsha esekwe ngesivalo, isitya sesaladi, umzi-mveliso wesitya se microwave kunye nabaxhasi | Jin Guan Yuan
I-3pcs ijikeleze iglasi isitya esitsha esekwe ngesivalo, isitya sesaladi, isitya se microwave
Isidlo se-PREP senziwe lula: izikhongozeli zeglasi zomelele zilungile ekutyeni KUDLULA, ukupakisha isidlo sasemini kunye nokugcina okuseleyo. Thenga iiseti ezininzi ukwenzela ukuba ulungiselele ukutya ngaphambi kwexesha kwaye ugcine efrijini okanye efrijini yokutya okunempilo okulungele ukuya!
Ixabiso: Iseti ibandakanya (5) izikhongozeli zeglasi ezicacileyo kunye (5) iiliti zomoya ezingafakwanga moya, isitya ngasinye sibambe iikomityi ezi-4 kwaye senziwe ngeTick kunye nokuqina kweglasi ekumgangatho ophezulu ukuze kujongeke kwaye kulungiswe ngokulula.
Kulula ukufudumeza: izitya zikhuselekile. Thatha nje isidlo sakho esele sele sipakishile kwaye usikhuphe kwimicrowave yesibhobho esishushu sakusasa, isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa!
Ii-4-indlela zokutshixa zamabhodlela: iilids zinee-4bhus ezihlayo kwaye zitshixe ngokuqinileyo, kodwa zilula kakhulu ukuvula, i-silicone gasket iqinisekisa ukutywinwa okuqinileyo kwaye akukho kuphalazwa.
Unakekelo kunye nobungakanani: iglasi ayifakwanga, i-oveni kunye nesitya kwisitya sikhuselekile. Kwiziphumo ezilungileyo musa ukufaka i-microwave lids. Isikhongozelo ngasinye siphethe ii-ounces ezingama-35 kunye nemilinganiselo emalunga ne-8. 25 "X 6. 25" X 3 "
ISIQINISEKISO SOKUGQIBELA KWENZIWA KULULA: Izixhobo zeglasi, ezahluliweyo zahlulekile ukulungiselela isidlo sokuqala, ukupakisha isidlo sasemini kunye nokugcina okuseleyo. Thenga iiseti ezininzi ukwenzela ukuba ulungiselele ukutya ngaphambi kwexesha kwaye ugcine efrijini okanye efrijini yokutya okunempilo okulungele ukuya!
HLALANI NOKHUSELEKO LOKUTYA: Iseti ibandakanya iikhonteyina ezi-5 ezahlulwe zenziwe ngeglasi enomgangatho omde kunye ozinzileyo, izikhongozelo zineendawo ezimbini, ezifanelekileyo ukugcina i-veggies yakho yahlukile kwiprotheyini yakho okanye irayisi yakho yahlukile kwintlanzi yakho.
KULULA UKULUNGA: Iziqulatho zikhuselekile microsave. Thatha nje isidlo sakho esele sele sipakishile kwaye usikhuphe kwimicrowave yesibhobho esishushu sakusasa, isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa!
I-4-INDLELA YOKUZONGA UMNQOPHISO: Iilebhu zinee-4bhu ezihlayo kwaye zitshixe ngokuqinileyo, kodwa kulula kakhulu ukuzivula, i-silicone gasket iqinisekisa ukutywinwa okuqinileyo kwaye akukho kuphalala.
UKUGCINWA NOKUQHUTYWA: Iglasi ifanelekile ukuba yenziwe, i-oveni kunye nesitya kwisitya sikhuselekile. Kwiziphumo ezilungileyo musa ukufaka i-microwave lids. Isikhongozelo ngasinye silinganisa malunga ne-7.25 "x 5" x 3 "
Okulandelayo: Iziqulathi zokuGcina ukuTya iziQinisekiso ezinamaLiza e-Airtight, Iseti yesi-5 | BPA-Simahla kunye neRain Resistant
Iglasi yezipho zeglasi, Ibhotile ye-cosmetic, Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Iglasi yeBhotile yeZithambiso, Iglasi yeJar Cosmetic, Iseti yeBhotile yeZithambiso,